Ahoana ny fampiasana Twitter | Martech Zone
Ahoana ny fampiasana Twitter
Talata, Aogositra 9, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Alohan'ny hanesoanao an'ity Infographic ity, androany fotsiny aho dia niara-niasa tamina mpanjifa tena mila paikady hiasa amin'ny Twitter. Heveriko fa ity infographic ity dia manome torohevitra tsara ho an'ny olona miaraka amin'ny torohevitra tsara rehetra manerana an'io. Raha ny paikadin'ny orinasa ho an'ny orinasa (B2B) dia manome paikady roa samihafa ho an'ny mpanjifako aho:
Voalohany, mamporisika ahy hanaraka ny mpitarika ao amin'ny Twitter ao amin'ny orinasany, atombohy ny resadresaka amin'izy ireo, mampiroborobo ny bitsika rehefa misy ny fotoana mety, ary manorata fifandraisana amin'izy ireo amin'ny Internet. Vitsy dia vitsy ny olona afaka miditra ao amin'ny Twitter fotsiny ary mahazo mpanaraka ampy hahazoana tombony avy hatrany amin'ny fampiasana azy. Ho antsika sisa, dia mila fantatry ny mpiara-belona amintsika isika ary ampidirina amin'ireo tambajotran'ireo mpiara-mianatra amintsika. Miaraka amin'ny mpanaraka efa ho 29k, izany no mahatonga ahy manandrana mijery ny fampiroboroboana ny hafa! Nisy nanao an'io raha mbola kely aho!
Faharoa, mamporisika azy ireo aho araho ny vinan'izy ireo. Rehefa mampitombo ny foto-pisainanao ao amin'ny Twitter ianao dia hisy fotoana bebe kokoa hifaneraserana amin'izy ireo. Tsy fantatrao mihitsy hoe rahoviana no mila fanampiana amin'ny prospect ao amin'ny Twitter ny olona iray… tongava any rehefa manontany izy ireo!
Misaotra ireo olona at Twiends ho an'ny sary lehibe!